ညီနေမင်း: visual basic 6.0
ကျွန်တော့်အမည် လှမင်းထိုက်ပါ ကျွန်တော် Visual Basic programming software ကို ကီးနဲ့ပါ အပြည့်အစုံလိုချင်လို့ပါ အစ်ကို
Virtual Basic 2008 ကိုလိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ပေးထားပြီးသားပါ .
Part(1) ၊ Part(2) ၊ Part(3) (Pass: http://www.farkliyiz.com)
Posted by ညီနေမင်း at 6:38 AM
Rapid Share နဲ့ နောက်မတင်ပါနဲ့ဗျာ. ဘယ် Software ဖြစ်ဖြစ် Rapid Share နဲ့ မတင်ပေးပါနဲ့။ မြန်မာ ဆိုရင် ပိုတောင် ဆိုးသေးတယ်. စိတ်ညစ်လွန်းလို့ပါ. အမြဲစိတ်ညစ်ရတယ် ဒေါင်းလို့မရဘူး. ifile ကလည်းလင့် မတွေ့ဘူး၊ သေချာပြန်စစ်ပေးပါအုံး။ Mediafire နဲ့ ဆိုပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျာ။ စောင့်နေမယ်နော်.မြန်မြန်လေး. ကျေးဇူးပါ.
ညီနေမင်း July 31, 2009 at 8:22 PM
ကျွန်တော်ဘာလို့ rapid share နဲ့ အရင်တင်လဲဆိုရင် rapidshare က ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ အကောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ file ဟာ ဘယ်တော့မှ link မသေတော့ပါဘူး . အဲ့ဒါကြောင့်တင်ထားတာပါ . တစ်ခြားလိုအပ်တဲ့သူတွေလဲ နောက်တစ်ချိန် download လုပ်လို့ရအောင်လို့ပါ .